Avadiho ho jpg ny teny: programa izay hanampy anao hahatratra azy | Famoronana an-tserasera
Avadiho ho jpg ny teny
Indraindray ianao mila mamorona infografika, na peta-drindrina ary, satria tsy mahay mandefa sary ianao dia misafidy ny Word hanao izany. Ankehitriny, rehefa mila manova ny Word ho JPG ianao dia miova ny toe-javatra, satria tsy mora ny manao azy (tsy manome safidy anao izy ireo hanovana azy).
Soa ihany fa afaka manampy anao amin'izany izahay, satria misy programa marobe manova tahirin-tsoratra, toa ny Word, ho fisie sary, toa ny JPG. Te hahafantatra ny fomba hanovana ny Word ho JPG ve ianao? Etsy ambany, manome safidy vitsivitsy anao izahay hahatratrarana ny vokatra tadiavinao.
1 Inona no atao hoe rakitra Word
2 Inona ny rakitra JPG
3 Fandaharana hanovana Word ho JPG
3.4 Niova fo an-tserasera
3.5 Avadiho ny teny ho JPG amin'ny alàlan'ny programa fanovana sary
4 Avadiho ho JPG ny Word amin'ny programa hafa
Inona no atao hoe a Tahirin-kevitra avy amin'ny teny
Teny no iantsoana azy, nohafohezina ho a Antontan-taratasy Microsoft Word. Izy io, noho izany, ny vokatra azo rehefa miasa miaraka amina mpandika teny, iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ankehitriny.
Ny programa Word dia teraka tamin'ny 1981, tamin'ny alàlan'ny IBM. Ary izy io dia natao mba hamelabelarana lahatsoratra amin'ny solosaina amin'ny ambaratonga tsotra (na dia, miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana aza, dia nitombo izany mandra-pahatongan'ny zavatra fantatrao ankehitriny). Raha ny marina, amin'izao fotoana izao, anisan'ireo fiasa azonao atao amin'ny Word ny:
Manoratra lahatsoratra, ary koa ny tsangambato, lahatsoratra nasaina ... mahay misafidy ny endri-tsoratra, habe, sahisahy, italiana, strikethrough ...
Ampidiro sary izay manampy amin'ny fampiroboroboana an-tsary ny lahatsoratra.
Mamorona latabatra hampanan-karena ny fampahalalana na hanasokajiana azy hahamandamina azy kokoa.
Mifandraisa amin'ireo programa hafa ao amin'ny suite an'ny Office, toy ny Excel (data apetaka) na PowertPoint.
Raha fintinina dia miresaka a fitaovana ampiasaina hamoronana lahatsoratra, fa azo ampiasaina koa izy io mba hampidirana latabatra sy sary ary hanovana azy ireo amin'ny ambaratonga tena fototra.
Ny valiny dia voatahiry ao anaty rakitra an-tsoratra, Word iray, izay hanana ny doc extension na docx. Na izany aza, ny programa dia mamela anao hitahiry azy amin'ny endrika hafa toy ny PDF, HTML, lahatsoratra manankarena ... Fa tsy toy ny JPG.
Inona ny rakitra JPG
Etsy ankilany, manana rakitra JPG izahay. Sa inona no mitovy, a Vondron'ireo manam-pahaizana manokana momba ny sary, fantatra koa amin'ny hoe JPEG. Izy io dia endrika endrika manolotra kalitaon'ny sary azo ekena (amin'ny alàlan'ny famatrarana).
Raha ampitahaina amin'ny etsy ambony dia miresaka zavatra samihafa isika, satria amin'ity tranga ity ny JPG dia mifantoka amin'ny sary fa tsy amin'ny lahatsoratra. Na izany aza, tsy midika izany fa ao amin'ny JPG dia tsy misy soratra, ny mifanohitra amin'izay dia afaka miseho.
Na izany aza, antontan-taratasy hita maso fotsiny izy io, satria sary iray izay hitazomana kalitao sahaza azy izay hiankina amin'ny programa ampiasainao hampihena kalitao bebe kokoa na latsaka. Ho fanampin'izany, azo zaraina amin'ny tambajotra sosialy izy io, afaka jerena, tsy toy ny Word, izay ilaina ny manana programa mifanentana hahafahana manokatra azy (raha tsy manana ianao dia tsy ho afaka hijerena izay ao anatin'io antontan-taratasy io).
Fandaharana hanovana Word ho JPG
Ankoatr'izay ny Teny sy ny JPG dia zavatra roa samy hafa, iray amin'ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ireo endrika roa ireo dia tsy isalasalana fa ny fakana sary an-tsaina azy ireo. Na dia azonao atao aza ny manokatra JPG saika mandeha ho azy (tsy mila mametraka programa), amin'ny tranga Word dia tsy izany no izy; ilaina ny programa iray hahazoana ny fampahalalana (sary, soratra, sary ...) izay ao anatiny.
Noho izany, maro no mila manova ny Word ho JPG, ary satria tsy avelan'ny programa mihitsy, Hanolotra fitaovana vitsivitsy hanampy anao hahatratra an'ity valiny ity izahay.
Ity pejy web ity dia tsy hanampy anao hanova Word ho JPG fotsiny, fa manana safidy hafa koa (toa ny JPG ho PDF). Tsotra be ny fampiasana azy satria ny bokotra fampakaram-pahefana fotsiny no tsindrio ary safidinao ny rakitra Word tianao hivadika.
Manana tombony izany azonao atao ny mampakatra maro amin'ny fotoana iray, hatramin'ny 20.
Mila manana faharetana kely fotsiny ianao amin'ny fampidinana ireo rakitra rehetra ary hamita ny dingan'ny fiovam-po hanefana ny valiny. Raha mampakatra marobe ianao dia azonao atao ny misintona azy ireo aorian'ny zip.
Aza manaiky ho voafitaky ny anarana fa afaka mamadika ny Word ho JPG mora foana ianao. Raha ny marina, ity fitaovana ity dia tsy vitan'ny hoe mamadika ny antontan-taratasy ho sary fotsiny, fa koa azonao atao ny misafidy ny fandikana DPI, ny kalitaon'ny JPG ary inona no hatao aorian'ny fanovana.
Safidy iray hafa amin'ny Internet hanovana Word ho JPG dia ity. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampakatra ireo antontan-taratasy izay ilainao hivadika ary miandry segondra vitsy vao vita ny valiny.
Mifanohitra amin'ny teo aloha, eto dia tsy manome safidy hanovana ny kalitaon'ny JPG.
Niova fo an-tserasera
Pejy tranonkala iray hafa hanovana ny Word ho JPG, na araka ny voalaza, DOC ho JPG. Ny tombony an'io dia izany dia mamela anao hanao fanitsiana fanampiny, toy ny kalitao, famatrarana sary, manova ny haben'ny sary, mandoko, manatsara ny sary mihitsy (amin'ny resaka normalisation azy, mifantoka amin'izany, manala ireo spot, manao réignignement….), mametraka ny DPI tadiavina, mametaka pixel na mametraka ny vavahady mainty sy fotsy
Avadiho ny teny ho JPG amin'ny alàlan'ny programa fanovana sary
Raha tsy te hampakatra antontan-taratasy amin'ny Internet ianao satria amin'izay dia mijanona tsy mifehy azy ireo ary aleonao safidy "azo antoka" kokoa, na satria zava-dehibe ny antontan-taratasy na satria tsy matoky ianao dia misy safidy maromaro azonao dinihina.
Raha manana Paint ianao, na mpamoaka sary hafa, azonao atao ny misafidy ny hampiasa azy io hanovana ny Word ho JPG. Eny tokoa, mila "miasa" kely ianao, satria izao no tokony hataonao:
Sokafy ny antontan-taratasy Word izay tianao zaraina. Raha tsy hitanao eo amin'ny efijery ny zava-drehetra dia mandehana mijery aloha ary ezaha asehoy manontolo izany.
Makà pikantsary izao.
Open Paint na programa fanovana sary.
Sokafy ny pikantsary izay vao noraisinao.
Tsy maintsy esorinao fotsiny ny ampahany mahaliana anao ary tehirizo ho JPG.
Avadiho ho JPG ny Word amin'ny programa hafa
Safidy hafa, avy amin'ny PC anao ihany koa dia mampiasa programa fanovana. Amin'ity tranga ity dia amporisihinay ireto manaraka ireto:
Converter AVS Document maimaim-poana. Tena mora ampiasaina sy haingana.
Free Docx mankany amin'ny JPG Converter.
Batch Word mankany amin'ny JPG Converter.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Avadiho ho jpg ny teny